Lifestyle – WunYan
ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးဆိုသူများအတွက် နည်းလမ်း (၇) ခု
Posted on March 2, 2019 by whuk-46651
ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း (၇) ခု စီးပွားရေး, အောင်မြင်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေအားလုံးက သင်ရှာနိုင်တာထက် လျှော့ပြီးသုံးဖို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အသုံးစရိတ်က ၀င်ငွေထက် နည်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားဖူးနေတာ မှန်ပေမယ့် သေချာနားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၀င်ငွေထက် နည်းတဲ့ အသုံးစရိတ်နဲ့ ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုရော ကြိုးစားကြည့်ဖူးပါသလား။ အများစုအတွက်တော့ ၀င်ငွေထက် လျော့နည်းတဲ့အသုံးစရိတ်နဲ့ နေထိုင်ဖို့က ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး။ အိမ်ငှားခတွေ၊…
အဝတ်တွေမှာ ပေသွားတဲ့ အစွန်းအထင်း မှန်သမျှကို ချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
Posted on September 24, 2018 by whuk-46651
သင်အရမ်းကြိုက်တဲ့ အဝတ်အစားတစ်ခုခုမှာ အရောင်တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်းတစ်ခုခု စွန်းပေသွားတဲ့အခါ နှမြောတသ ဖြစ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စွန်းသွားတဲ့အရာအလိုက် ချွတ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိနေလို့ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁. နှုတ်ခမ်းနီပေသွားခဲ့ရင် အဝတ်စနဲ့ အရက်ကိုတို့ပြီး ပေသွားတဲ့နေရာကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၂. မြက်ပေါ်မှာထိုင်တာကြာလို့ မြက်တွေစွန်းသွားရင် ရှာလကာရည်ထဲကို နာရီဝက်ခန့်စိမ်ပြီး လျှော်ပေးလိုက်ပါ။ ၃. ဝိုင်နီပေသွားခဲ့ရင် ဝိုင်ဖြူနဲ့ ပြန်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄. မှင်စွန်းသွားခဲ့ရင် နွားနို့ထဲကို စိမ်လိုက်ပါ။…
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း လုံးဝလုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေ
ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ မနက်ခင်း အိပ်ရာနိုးနိုးခြင်းနဲ့ စတင်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်နေရင်းက လုပ်သင့်တာတွေကို မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲ နစ်နာရတာပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းမှာ ဒါတွေကို မလုပ်မိဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ တစ်မှေးပြန်အိပ်ခြင်း အိပ်ရာနိုးပြီဆိုတာနဲ့ တစ်မှေးလောက်ပြန်မှေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဦးနှောက်က အိပ်စက်မှုစက်ဝန်းကို ပြန်ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်နိုးလာရင်လည်း မူးနောက်နောက်ကြီး ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ ၂။ ကော်ဖီသောက်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ…
အမျိုးသမီးအများစုဟာ ဘရာဝတ်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး ဘရာဝတ်ခြင်းက ရင်သားအလှအတွက် ကောင်းမွန်တယ်လို့ အထင်မှားတတ်ကြပါတယ် ။ ဘရာဝတ်ဆင်ခြင်းက ရင်သားအလှအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ဆိုးကျိုးများစွာ ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘရာကို လုံးဝ မဝတ်သင့်တော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့.. ၁။ ဘရာဝတ်ခြင်းက ရင်သားတွဲကျမှု ပိုမိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ရင်သားမှာရှိနေတဲ့ အရွတ်တွေက သဘာဝအတိုင်း ရင်သားတွဲမကျအောင် ထိန်းသိမ်းပင့်တင်ပေးပါတယ် ။ သို့သော်…
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ညဖက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ခက်နေလား။ ၄-၇-၈ ဆိုတဲ့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ဦးနှောက်ကနေ တွေးနေတဲ့အတွေးတွေကို ရပ်တန့်ပြီး အိပ်မောကျစေဖို့ အကူအညီဖြစ်စေမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ အမေရိကန်က နာမည်ကျော် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Andrew Weil က ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့ အသက်ရှုတဲ့နည်းလမ်းကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အဆုတ်ထဲမှာ အောက်စီဂျင်ရောက်ရှိမှုလည်း ပိုကောင်းတယ်သလို…
အမျိုးသားတွေ သိထားသင့်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ သဘောထား အမျိုးသားအများစုက ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျပေမဲ့ မရွေးချယ်ရဲကြပါဘူး။ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ဆရာကြီးစတိုင်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြာရင် စိတ်ပျက်စရာကောင်းမှာပဲလို့ တွေးပြီး အမျိုးသားတွေဟာ သဘောကျပေမဲ့လည်း ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် မရွေးချယ်ချင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါမှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆပါ။ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားက အမျိုးသားတွေထင်သလို မဟုတ်ပါဘူး။ ၁။ ယှဉ်ပြိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ထက်မြက်တဲ့…
မိန်းမရေ… ဒီစာရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ငါမင်းကို တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ခွဲခွာသွားပြီဆိုတာ ပြောချင်လို့ပါပဲ။ ငါမင်းအတွက် ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ၇နှစ်ကြာအောင် နေလာပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေပြစရာတောင် မလိုပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပတ်လောက်ကတည်းက မင်းရဲ့ခင်ပွန်းအဖြစ်နေနေရတာ ငါ့အတွက်ငရဲကျနေသလိုပဲ။ မင်းသိလား… မင်းအလုပ်ရှင်က ငါ့ဆီဖုန်းဆက်တယ်၊ မင်းရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်သွားတယ်တဲ့။ ဟိုအရင်တစ်ရက်ကလည်း မင်းအိမ်ပြန်လာပြီး ငါ့ကိုတွေ့တာတောင် ငါဆံပင်ညှပ်ပြီးပုံစံအသစ်ပြောင်းထားမှန်း မင်းသတိတောင် မထားမိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ ပြီးတော့ မင်းအကြိုက်ဆုံးဟင်းချက်ပြီး ညစာပြင်ပေးထားတာကိုလည်း မင်းသတိမထားခဲ့မိဘူးလေ။ ၂မိနစ်လောက်ပဲ ထမင်းစားပြီး…